पसलबाट किनेर घरमा ल्याउँदा सोफाभित्र लुकेको भेटियो ५ फिट लामो सर्प
पसलबाट किनेर ल्याएको सोफाभित्र ५ फिट लामो सर्प भेटियो भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ला । तर अमेरिकाको फ्लोरिडामा एक जनाले किनेर घरमा ल्याएको सोफामा सर्प भेटिएको छ । भर्खरै किनेर ल्याएको सोफाभित्र लामो सर्प भेटिएपछि सर्वसाधारण त्रसित बनेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीले घरमा आएर सर्पलाई नियन्त्रणमा लिएर लगेका छन् । प्रहरीका अनुसार सर्प सोफाभित्र लुकेको थियो । त्यसैले प्रहरीले सोफालाई घरबाहिर निकालेर नियन्त्रणमा लिएको थियो । घरबाहिर निकालेर सोफालाई हल्लाउँदै सर्पलाई सोफाबाहिर निकालिएको जनाइएको छ ।
एजेन्सी । अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा बस्दै आएका ४९ वर्षीय एक पुरुषले सर्प पाल्दा ज्यान नै गुमाउनु परेको छ । उनले आफ्नो घरमा १ सय २४ वटा विषालु सर्प पाल्दै आएका थिए । उनले पालेका बिसालु सर्पहरूमा कोब्रा, ब्ल्याक माम्बा र १४ फिट लामो बर्मीज अजिंगर सर्प पनि थिए । तर, गत १९ जनवरीमा ती पुरुष सर्पहरूकाबीचमा […]
तस्बिरमा गोमन सर्प
सुवोध आचार्य विगत केहि वर्षदेखि सर्प संरक्षणमा जुटेका छन् । काठमाडौं आसपासका विभिन्न ठाउँबाट सुवोधले अहिलेसम्म १० वटा सर्पको संरक्षण गरेका छन् । बुधबार बिहान पनि उनले दक्षिणकाली स्थित वडा नम्बर...
कञ्चनपुरको झलारी बजारमा सर्प देखाएर पैसा माग्दै गरेका महिला । बञ्जारा जातिका महिला बजारमा सर्प देखाएर आउने पैसाले परिवारको खर्च चलाउने गरेका छन् । तस्वीर रासस
सर्प देखाएर पैसा मागिइँदै
कञ्चनपुर, ९ माघ: कञ्चनपुरको झलारी बजारमा सर्प देखाएर पैसा माग्दै गरेका महिला । बञ्जारा जातिका महिला बजारमा सर्प देखाएर आउने पैसाले परिवारको खर्च चलाउने गरेका छन् ।-तस्वीर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु-रासस
सर्प खेलाएर दैनिक जोहो
कञ्चनपुरको झलारी बजारमा सर्प देखाएर पैसा माग्दै गरेका महिला । बञ्जारा जातिका महिला बजारमा सर्प देखाएर आउने पैसाले परिवारको खर्च चलाउने गरेका छन् । तस्वीर- राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
यौनशक्ति बढाउने यो सर्प
एजेन्सी, २० कात्तिक । यो दुई मुख भएको सर्प हो । यो सर्प तस्करसँग बरामद गरिएको हो । तस्करले अन्र्तराष्ट्रिय १० लाख रुपैयाँ राखेर बेच्न खोजेको थियो । सर्पलाई यौन शक्ति बढाउने औषधिका प्रयोग गरिने जनाइएको छ । सर्पबाट इन्डोनेशिया, चीन र साउदी अरब जस्ता देशहरुमा यौन शक्ति बढाउने औषधि बनाउने धेरै पुरानो चलन हो […]
जङ्गलमा सर्प छोड्ने क्रममा बाबुछोरी
पोखराका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरी ल्याइएका सर्प जङ्गलमा लगेर छाड्दै बाबुछोरी । पोखरा महानगरपालिका–६ जरेवरका आकाश भण्डारी विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर सर्प उद्धार कार्यमा लागिरहेका छ्न् भने एक वर्षदेखि बुबासँगै ११ वर्षीया छोरी डेजी पनि सर्प उद्धारमा जुट्दै आएकी छन्। तस्बिरः रासस
कहिलेकाँही हामीले यस्तो ठाउँमा सर्प देखिरहेको हुन्छौं जहाँ हामीले यो देख्नेबारे कहिल्यै सोचेका पनि हुँदैनौं । तर जब खानाको सामानमा सर्प भेटिन्छ तब सायद सबै हैरान हुन्छन् । यस्तै एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ सलादको प्याकेटबाट विषालु सर्प निस्किएको छ ।‘द गार्जियन’ को एक रिपोर्ट अनुसार यो घटना अष्ट्रेलियाको सिड्नी शहरको हो । यी व्यक्तिले कहिल्यै सोचेका थिएनन् होला कि सलाद खरिद गर्नुको परिणाम के हुनेछ । घर पुगेपछि जब उनले सलादको प्याकेट खोले तब त्यसबाट विषालु सर्प निस्कियो ।अलेक्जेन्ड
नुहाउन बाथरूम जाँदा सर्प देखेपछि भागाभाग
तपाईं नुहाउनका लागि बाथरूममा जाँदा त्यहाँको शावरमा सर्प देख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? यो घटना अस्ट्रेलियाको बुसल्याण्डको हो । त्यहाँ एक मानिस नुहाउनका लागि बाथरूममा गएका थिए । त्यति नै बेला उनले शावरमा एक विशालु एवम् ठूलो सर्प देखे । शावरमा सर्प देख्नासाथ उनी पुरै डराए । उनले तत्कालै निहुरेर बाथरूमबाट बाहिर निस्किएर ज्यान बचाए । एजेन्सी
के फोटो खिच्ने सर्प नि हुन्छ त?
तपाईंहरुले सुन्नु र देख्नु भएको होला, सर्पले फोटो खिच्छ भनेर तपाईंको छरछिमेक वा करेसाबारीमा आएको सर्प मारेको। कि कसो? फोटो खिच्ने सर्पलाई मारेन भने फेरि भरे राति वा पछि बदला लिन्छ भनेर मानिसहरुले कुरा गरेको पनि सुन्नु भएको होला नि, हैन?